Coral Reef: လက်သည်းခွံပေါ်က မြေတစ်မှုန့်
MG THANT said on June 9, 2013 at 12:23 AM
ကိုယ့်ဘ၀ကို ပိုပြီး ပိုပြီး လေးစားတန်ဖိုးထားတတ်လာသလို ဆက်ပြီးတော့ လူပီသတဲ့ လူဖြစ်ကြိုးစားဖြစ်တော့မယ်။
မွေးနေ့မှသည် သက်ဆုံးတိုင် တရားထူး တရားမြတ်များ ရရှိအောင် အားထုတ်နိုင်ပါစေ 
:P said on June 9, 2013 at 9:55 AM
တော်လိုက်တာ.. ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့လူတွေ ဘုရား တရားလုပ် နေကြတာ မြင်တိုင်း သိပ်အားကျတာပဲ
ညီလင်းသစ် said on June 10, 2013 at 6:34 AM
လက်သည်းခွံပေါ်က မြေမှုန့်လေး ၃၄ မှုန့်ရဲ့ တရားအသိကို သေသေချာချာ ဖတ်သွားပါတယ်...၊း)
လူ့ဘဝသက်တမ်း တဝက် မရောက်ခင်မှာကိုပဲ ရတနာသုံးပါးကို အကြွင်းမဲ့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပြီး ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာကို အချိန်ရရင် ရသလို အားထုတ်ကျင့်ကြံ၊ လိုက်လျှောက်နေတဲ့ ညီမလေးဇွန် အတွက် လေးစား၊ ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ..၊
တရားနဲ့ ယှဉ်ပြီး အောက်မေ့တဲ့ ဟောဒီ မွေးနေ့မှာလည်း မမေ့မလျော့သော သတိနဲ့အတူ စိတ်နှလုံး ငြိမ်းချမ်းမှု အပြည့်နဲ့ မင်္ဂလာရှိစွာ အေးချမ်းပါစေလို့လည်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပါတယ် ဇွန်ရေ...။
မမင်း said on June 10, 2013 at 8:35 AM
သူမ ဖြစ်တည်ခဲ့သော၊ ဖြတ်သန်းခဲ့သော ဘ၀အစိတ်အပိုင်းများသည် အစပိုင်းတွင် လွဲချော်မှုများရှိခဲ့သော်လည်း
စစ်မှန်သော ဘာသာတရားကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ရအောင် လမ်းကြောင်းတည်ပေးခဲ့သည့်အတွက်.. တဲ့
(ဘဝအဆက်အဆက်က ဆည်းပူးအပ်ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်ပါရမီများကြောင့် လို့ထင်ပါတယ်)
မနေ့က ဇွန့်မွေးနေ့အလှူအတွက် ရောက်ခဲလှတဲ့ တိုးပါးယိုးကျောင်းကြီးကိုရောက်ဖြစ်တော့
၁။ ဆွမ်းအလှူ၊ သင်္ကန်းနှင့်တကွ ပရိက္ခရာ၈ပါးအလှူ၊ နဝကမ္မဝတ္ထုငွေအလှူ၊ လူ၅၅ဦးစာ ထောပတ်ထမင်းအလှူ.. ဒါနဉ္စ မင်္ဂလာ
၂။ ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်၊ သီလကုသိုလ်
၃။ ကာလေန ဓမ္မဿဝနာ (မွေးနေ့တရား စက်လေးပါး) နှင့် ဘာဝနာကုသိုလ်များ
ပတ္တိဒါန ပတ္တာနုမောဒနာတွေပြုလို့ ကုသိုလ်မင်္ဂလာအဖြာဖြာနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့ မွေးနေ့ပွဲရယ်၊
ထုံးစံအတိုင်း စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းလှတဲ့ မွေးနေ့ရှင်ရဲ့အပြုံးတွေရယ်ကြောင့်
ကျေနပ်ကြည်နူးစွာ ကုသိုလ်ဓာတ်များမျှယူကူးစက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်လျက်ရှိပါတယ်။
စက်လေးပါးပြည့်စုံပြီးသား ဇွန်မိုးစက် အတွက် ဘာဆုတောင်းမှ ဆုတောင်ပေးစရာမလိုအပ်တော့ဘူးလို့ ယုံကြည်နေမိတယ်...
Anonymous said on June 10, 2013 at 3:10 PM
ဖတ်လို့လည်းကောင်းလိုက်နာဖို့လည်းကောင်းပါတယ် ဇွန် ရေ....
Goldfish Lay said on June 10, 2013 at 8:18 PM
Happy Birthday ပါ။ Thanks for suchanice article..
ဇွန်မိုးစက် said on June 10, 2013 at 10:01 PM
Mg Thant, :P, ကိုညီလင်းသစ်၊ မမင်း၊ မ mz, Goldfish Lay ... မွေးနေ့အမှတ်တရပို့စ်ကို တခုတ်တရ လာဖတ်တဲ့အတွက်ရော၊ ဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက်ရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။း)
နောင်လာမယ့် မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကိုလည်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့် ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါစေ....
တရားအသိကို ဖြန့်ဝေပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် မရေ.
Anonymous said on June 11, 2013 at 9:34 PM
မဇွန်အိမ်လေးကို လာဖတ်ပေးမဲ့ comment တခါမှမရေးခဲ့ပေမဲ့ ဒီမွေးနေ့ ပို့စ်လေးက ပေးတဲ့အသိအတွက်တော့
ဇွန်မိုးစက် said on June 11, 2013 at 9:54 PM
ကျေးဇူးတင်စကား လာရောက်ဆိုသွားတဲ့ ညီမနှင်းဖူးနဲ့ YNT တို့ရဲ့ ကော်မန့်လေးတွေအတွက်လည်း မဇွန်က ပြန်ပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့..း)
Anonymous said on June 13, 2013 at 1:25 PM
အရေးအသားတွေကောင်းလွန်းလို.ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့လက်ရှိရနေတဲ့ဘ၀ကိုတောင်ပိုပြီးတန်ဘိုးထားမိပါတယ်။ဇွန်တစ်ယောက်လည်းလက်ရှိထက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘ၀အခြေအနေနဲ့ တန်ဘိုးရှိတဲ့တရားတွေကို နာကြားပွားများရင်းအမြဲပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို.ဆုမွန်တောင်းလျှက်....
တန်ခူး said on June 26, 2013 at 5:46 AM
ညီမလေးရေ.့ ဟိုတနေ့ ထဲကဖတ်ပြီး ဖုန်းနဲ့ မို့ မြန်မာလိုကော်မန့် ပေးမရလို့ ခုမှပေးလိုက်ရတယ်. တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝအတွေ့ အကြုံလေးကို ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့အရေးအသားလေးနဲ့ ဖတ်ရတာကြည်နူးမိတယ်. စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပြီးဘာသာသာသနာအကျိုးကို နောင်နှစ်ပေါင်းရာထောင်သောင်းထိ ဒီထက်မကလုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေ. ကောင်းသောမွေးနေ့ ပါညီမရေ
ဇွန်မိုးစက် said on June 26, 2013 at 8:17 AM
ဆုတောင်းပေးသွားတဲ့ အမြဲတမ်းသူငယ်ချင်းနဲ့ ဖတ်ပြီးပေမယ့် သတိတရနဲ့တစ်ခေါက်လာထပ်ပြီး ကော်မန့်ပေးသွားတဲ့ အစ်မတန်ခူးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။း)
အောင်ကြူး said on June 30, 2013 at 9:49 AM
ကော်ပီကူးပီး ဖေ့ဘွတ်တွင် မူရင်းလင့်ခ်နှင့်တကွ တင်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျား...
ဇွန်မိုးစက် said on June 30, 2013 at 10:18 AM
ဟုတ်ကဲ့ရှင့်... ရပါတယ်၊ မူရင်းလင့်ခ်နှင့်တကွ ဖော်ပြပေးမယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မိုးခါး said on July 1, 2013 at 9:55 PM
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ မရေ .. စိတ်ထဲအေးချမ်းသွားတယ် ..
အသက်ထက်ဆုံး သာသနာအကျိုး သယ်ပိုးထမ်းရွက်နိုင်ပါစေ .. ညီမတို့ရဲ့ ရည်မှန်းရာ အေးချမ်းရာ အရပ်ဆီ .. ထိုခရီး တကယ်တော့ မဝေးလှပါဘူးနော် ..း)
မဇွန် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေ .. ရည်မှန်းချက် ရည်ရွယ်ချက်တွေ အမြန်ပြည့်ဝပါစေ ..း)
ဇွန်မိုးစက် said on July 2, 2013 at 10:54 PM
ဆုတောင်းတွေအတွက် တခဲနက်ကျေးဇူးပါ ညီမလေးမိုးခါး။း))
Ma Tint said on July 4, 2013 at 12:56 AM
အန်တီတင့်ရဲ့ လင့်ခ်အသစ် ပြောင်းချိတ်ပေးစေလိုပါတယ် http://www.auntytint.blogspot.com